Qalabka kale ee wax lagu qaado, Baabuurka gurguurta & Alaab-qeybiyeyaasha Saxafada | EPONT Jack
Guriga > Alaabta > Qalabka Kale ee Wax-qaadista
Dhererka baabuurka gurguurta ayaa ah mid hooseeya, kaas oo dammaanad qaadaya awoodiisa taraafikada ee wanaagsan oo si fudud uga gudbi kara gunta hoose ee baabuurka. Waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada baabuurta mana aha oo kaliya isticmaalka guriga, laakiin sidoo kale dukaamada 4S.
Fireemka gaariga gurguurta ayaa ka sameysan tuubooyinka birta, kuwaasoo qaadi kara culeyska ugu badan ee 300 rodol, waxaana isticmaali kara nin weyn oo ku jiifa. Dusha sare ee tuubada birta waxaa lagu daboolay rinji, kaas oo ka hortagi kara miridhku kordhinta nolosha adeegga.
Waxa jira lix taayir oo caalami ah xagga hoose ee meesha gurguurta ee gaadhiga kuwaas oo dabacsan oo guurguuran leh. Waxaad koontarooli kartaa baabuurka gurguurta si aad u hubiso gees walba oo chassis baabuurka adoon ka tagin gees kasta oo badbaado ah.
Madbacada dukaankan waxaa loogu talagalay toosinta, laacida, riixida, iyo shaabadaynta.
EPONT Jack Stand&Dabaqa Jidka ee Isticmaalka BaabuurkaWaxaan nahay Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. -- EPONT, alaabadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 wadan sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo iwm. Macaamiishayada waxaa ku jira kuwo badan. Macaamiisha OEM ee ku takhasusay tareennada, baabuurta, fargeeto iyo mishiinnada dhismaha, waxaanu hore ula yeelanay iskaashi in ka badan 10 ka mid ah shirkadaha ugu sarreeya adduunka ee 500 oo ah mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha.
Bandhigga Tusaalaha Jack.Alaabtayadu waxay dhaafeen CE, GS& Shahaadada TUV ee Midowga Yurub. Tayada alaabtayadu waa run oo la isku halayn karo. Si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa suuqyada Yurub iyo Ameerika. Dhammaan alaabooyinka waxay qaataan rinjiyeynta ilaalinta deegaanka ee elektrostatic iyo - 45 ° saliid hydraulic, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa meelaha aadka u qabow. Fadlan nagu kalsoonow. Haddii aan doorano epont, waxaan sii wadi doonaa inaan sameyno si ka sii wanaagsan oo ka sii wanaagsan
Alaabtayadu waxay dhaafeen CE, GS& Shahaadada TUV ee Midowga Yurub. Tayada alaabtayadu waa run oo la isku halayn karo. Si fiican ayaa loogu iibiyaa suuqyada Yurub iyo Ameerika. Dhammaan alaabooyinka waxay qaataan rinjiyeynta ilaalinta deegaanka ee elektrostatic iyo - 45 ° saliid biyo nadiif ah, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa meelaha aadka u qabow. Fadlan nagu kalsoonow. Haddii aan doorano epont, waxaan sii wadi doonaa inaan sameyno si ka sii wanaagsan oo ka sii wanaagsan